Real Madrid Iyo Barcelona Oo Ku Tartamaya Saxeexa Xiddig - Axadle | Wararka Africa
Real Madrid Iyo Barcelona Oo Ku Tartamaya Saxeexa Xiddig
Liverpool iyo Manchester United ayaa war wanaagsan ka helay saxeexa daafaca 22 sano jirka ah ee RB Leipzig ee Dayot Upamecano iyadoo mustaqbalkiisa la go’aamin doono bisha January, Bayern Munich ayaa la sheegay inaysan awoodi doonin saxeexiisa. (Bild via Mirror)
Goolhayaha kooxda Chelsea iyo xulka Spain ee Kepa Arrizabalaga ayaa qaab amaah ah kaga bixi doona kooxdaas isagoo xataa mushahar dhimis samayn doona si uu waayihiisa ciyaareed dib ugu soo nooleeyo. (Sun)
Manchester United ayaa haysata fursada ay kula soo wareegto daafaca dhexe ee Real Madrid ee Raphael Varane. (Manchester Evening News)
Real Madrid ayaa Barcelona kula tartami doonta saxeexa khadka dhexe ee Liverpool ee Georginio Wijnaldum oo 30 sano jir ah. (Corriere Dello Sport via Sport)
Xiddigii hore ee xulka qaranka Cameroon iyo kooxda Barcelona ee Samuel Eto’o oo 39 sano jir ah ayaa wadahadalo kula jira kooxda dookha saddexaad ee Spain ee Racing de Murcia isagoo ka fikiraya inuu kubadda cagta kusoo laabto walow uu September 2019 kubadda cagta ka fadhiistay. (Goal)
Kabtanka Barcelona ee Lionel Messi ayaa wargelin dadban u diray Manchester City oo saxeexiisa doonaysa kaddib markii uu qirtay inuu ka daalay in lagu eedeeyo dhammaan waxa kooxda ka dhaca. (Express)
Bayern Munich daafaceeda David Alaba ayaa bar-tilmaameedka koowaad u ah Real Madrid haddiiba uu Sergio Ramos ka tago dhammaadka xilli ciyaareedkan. (AS)
Barcelona ayaa u muuqata mid aan la saxeexan karin daafaca Manchester City ee Eric Garcia bisha January maadaama oo aysan City kasoo dagi doonin lacagta 20-ka Milyan ee euro ah ee ay ku doonaysay. (Marca)
Xiddigii hore ee Barcelona ee Xavid Hernandez ayaa noqon kara Sir Alex Ferguson-ka kooxdaasi hadiiba uu kusoo noqdo isaga oo tababare ah sida uu sheegay murashaxa madaxweyne ee Victor Font. (Reuters)
18 sano jirka khadka dhexe ee kooxda Rennes ee Eduardo Camavinga ayaa sheegay inuu ku riyoodo ku biirista koox weyn walow uusan meesha ka saarin inuu kooxdiisa heshiis kordhin u samayn karo. (AS)
the shadow Blaise Compaoré hangs over the countryside